Ukuseta urhwebo-i-EURUSD, i-XAUUSD kunye ne-CADJPY (ii-Pheleleyo i-Pips) - Forex Lens
Ukusekwa koRhwebo-i-EURUSD, i-XAUUSD kunye ne-CADJPY (i-150 yeePips zizonke)
Wamkelekile kwesinye iseshoni yokurhweba nge-Forex yeRP Forex. Kwiseshoni yanamhlanje ephilayo, siye ngaphaya kwenqanaba langoku lezinto ezintathu eziye zahlalutywa izolo kunye nezorhwebo esingene ngazo bukhoma kwiseshoni yanamhlanje. Asikabi nelahleko kule veki (kwaye kule veki iphelileyo) kwaye yinto leyo onke amalungu ethu kwigumbi lokurhweba le-forex ayazingca ngayo.
Ngexesha leseshoni yezorhwebo yangoku izolo sifumene imiqondiso yorhwebo ye-AUDJPY, AUDUSD kunye neCADJPY. Ezimbini zorhwebo ezintathu zingenisiwe njengoko iimeko ezithile zokungena kubo zifezekisiwe. Senze uhlalutyo oluphilayo kunye nokungena kwi-CADJPY emfutshane kwaye isibini sizise ngaphezulu kwe-60 pips ukusukela ngoko. I-AUDJPY yethu ende yenziwe yasebenza emva kokuba sifumene ikhefu lokuphinda-ukwala ukwala kwinqanaba lethu eliphambili. Zombini ezi zorhwebo zibonelela ngenzuzo iyonke ye-100 iipips kunye nokubala.
Namhlanje, senze uhlalutyo lobuchwephesha kunye nomnxeba wesiginali weXAUUSD Gold kunye ne-EURUSD. Ngexesha leseshoni yethu yangoku engama-30, sikwazile ukufumanisa ngokulula iiseti zorhwebo kwangoko sisebenzisa iqhinga lesenzo sentengo. Ngokufanelekileyo, sifuna ukuphuma kule misebenzi ngaphambi kokuba kukhululwe iindaba ze-Non-Farm Payroll (NFP) yangomso.
Ngomso, ukukhutshwa kweLifayile eyiNge- fama (i-NFP) ngo-8: 30 AM EST, iiyure ezi-2 phambi kweseshoni yethu. Iimarike ziya kuba semagqabini phambi nasemva kokukhululwa, ke kufuneka ulumke. Siza kuxoxa ngokukhutshwa kweNFP, ukuba ihambe njani le veki yokuthengisa kunye nokuthengisa imiqondiso kwiveki ezayo. Siza kubona ngomso kwiseshoni yethu yasimahla yokuthengisa ngokuqala ngentsimbi ye-11: 00 ye-EST kwiPortal Room yethu. Thatha ukhathalelo kunye nokonwaba ngolonwabo. Ukuba awuzange ujoyine nathi okwangoku, hlala ukhumbula ukuba sinikezela ngeenyanga ezi-2 ngexabiso le-1 kude kube ngokuhlwa ezinzulwini zobusuku (ngo-12: 00 EST).
Ngena kwiZiko lokuThengisa Ukubukela iSeshini eNgcwele
Jonga iReport Yeseshoni Yangoku ye-Izolo: Oktobha 30th, 2019
Ukuba awukabhalisanga i Ubulungu beGumbi loRhwebo ngeMali, unokwenza njalo nge nqakraza apha.
Oktobha 31, 2019 /by Forex Lens iindaba
tags: cadjpy, imali zorhwebo, eurusd, isenzo ixabiso forex, imiqondiso Forex, igumbi lokurhweba le-forex, igolide, ze golide, kuphila ngokurhweba kwe-forex, phila ngokurhweba, urhwebo lwentengiso, iipipi, inzuzo, ukuseta urhwebo, yuyo
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2019/11/FXL-Youtube-October-31-20191.jpg 720 1280 Forex Lens iindaba https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png Forex Lens iindaba2019-10-31 12:04:152019-11-20 15:29:48Ukuseta urhwebo-i-EURUSD, i-XAUUSD kunye ne-CADJPY (ii-Pheleleyo i-Pips)
+120 Iipips ezivela kwiGolide + kwi-EURUSD yexesha elide?
Ioli e-Crude kwi-21 Year Under + Shorts zeGolide Ngaba ukulungele?
Ukufumana kwakhona (+205 Pips) + Kwiveki elandelayo yeNtengiso yeNtengiso
Ixesha elide le-EURUSD kunye ne-USDCHF Shorts njengoko iDola iyaqhubeka nokuTsala ezantsi
I-US Ivumela i-QE engenamkhawulo + Iziphumo kwiNtengiso ye-Forex
I-EURUSD kunye neNzuzo ye-GBPUSD + i-GBPJPY ukuya kwi-143.666?
Uhlalutyo lweNtengo yeNtengo-I-AUDUSD, AUDJPY kunye neCADJPY Veki yeNzuzo yokuRhola + ngeVeki yeVeki ezayo kwiNtengiso